प्रदिप खड्काको जवाफ : समाजसेवा प्रचार नगरी गर्दा हुन्छ कि प्रचार गर्नैपर्छ ? | Rochak
June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on प्रदिप खड्काको जवाफ : समाजसेवा प्रचार नगरी गर्दा हुन्छ कि प्रचार गर्नैपर्छ ?
उनै, प्रदिपले यसमा जवाफ दिदै लेखेका छन्–‘अक्षरस जाने हो भने भगवानले सहयोग गर्ने हो, भगवानलाई सहयोग आवश्यक पर्छ ? भावानात्मक रुपमा जाने हो भने आवश्यक पर्नेलाई पक्कै सहयोग गर्न पर्छ । विना प्रचार गर्दा हुन्छ कि प्रचार गरेरै गर्न पर्छ ?’
कपाल नुहाउने बित्तिकै नगर्नुहोस् यी गल्ती, हुनसक्छ यस्तो रोगको खतरा